ဒိလိုကကြုံခဲတယ် – Grab Love Story
မင်ဒီ့ရဲ့ လက်ကလေးတဖက်က သူ့ပေါင်ကြားက မာန်ဖီထကြွနေတဲ့ ဖွားဖက်တော်ကို လှမ်းဆုပ် ကိုင်ညှစ်လိုက်တာကို သိလိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်ကြတဲ့အချိန် မင်ဒီက “ မင်းကို စုတ်ချင်တယ် . . ” လို့ အသံ တုန်တုန်လေးနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း အထစ်ကို ဖမ်းငုံလိုက်တယ် ။ မင်ဒီ ခါတိုင်းလို မဟုတ်ဘဲ တမျိုးဖြစ်နေတယ် ။ မင်ဒီရဲ့ ပီပြင်တဲ့ စုတ်ချက်နဲ့ လျာကစားပေးတာတွေကြောင့် ပါးစပ်က ညည်းမိရတဲ့အထိ ခံလို့ တအား ကောင်းနေတယ် ။ မင်ဒီရဲ့ အစုတ်အယက်တွေက ခါတိုင်း ပေးဘူးတာတွေထက် ပိုပြီး ပီပြင်နေတယ် ။ “ အား………အင်း………. အိုး…….အား…….အား.. ….” မင်ဒီရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို တအား ညှစ်ကိုင်မိတယ် ။
သည်အတိုင်း ကြာကြာ အစုတ်ခံရင် ပြီးသွားနိုင်တယ် ။ မင်ဒီ့ကို တော်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းရဲရဲ လေးထဲက လိင်တန်ကို အသာ ဆွဲထုတ်လိုက်မိတယ် ။ မင်ဒီက ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲအိပ်ချလိုက်တယ် ။ ပေါင်တန်သွယ် ဖြူဖြူ နှစ်ချောင်းကို အသာဆွဲဖြဲကားလိုက်တယ် ။ အမွေးရှင်းထားတဲ့ ပြောင်မို့နေတဲ့ မင်ဒီ့အင်္ဂါစပ်လေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသား နီညိုညိုတွေက စိတ်တွေကို တအားထန်ကြွစေတယ် ။ ဒီဖေါင်းကြွကြွ အင်္ဂါစပ်ကို နမ်းရှုံ့ ယက်စုတ်ဖို့ တိုးကပ် လိုက်တဲ့အခါ မင်ဒီက “ မယက်နဲ့တော့…လိုးချင်လှပြီ….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ လက်ကို ဆွဲပြီး သူမကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခိုင်းတယ် ။ ပေါင်တန်တွေကိုလည်း အစွမ်းကုန် ဖြဲပေးတယ် ။ စိုရွဲနေတဲ့ မင်ဒီ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို လိင်တန်ထိပ် ဖိကပ်ချိန်လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ မင်ဒီ့ အော်သံလေး ထွက်လာ တယ် ။
မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး တအား ဖက်တွယ်လိုက်တာကို ခံရတယ် ။ “ အောင်..မင်းဟာက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုဘဲ..မင်း တခုခုများ လုပ်ထားသလား……” လို့လည်း တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောတယ် ။ “ ဘာမှ လုပ်မထားပါဘူး….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ လိင်တန် ကိုလည်း နောက်နည်းနည်း ပြန်ဆုတ်ပြီး ထပ်ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ “ အူး ….. အပြည့်အသိပ်ဘဲ အောင်ရယ်…အား……..တကယ့် ဖီလင်ဘဲ…….” မင်ဒီ့ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းနဲ့ အထုတ်တွေ မှန်မှန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ မင်ဒီ့နုတ်ဖျား က “ အင်း…….အိုး……….အိုး…..အား……အား…… .အား…..” ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေ ညည်းငြူလာတယ် ။ီနို့သီးဖုမာမာလုံးလုံးလေးေ တွကို စို့ယက်ပေးနေသလို လိင်တန်ကို သွက်သွက်လေး ထိုးထုတ်ပေးနေမိ တယ် ။
မင်ဒီက သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်ထောင်လိုက်ပြီး ဖင်တွေကိုလည်း ကော့ပေးလာတယ် ။ “ ကြိုက်လား..မင်ဒီ…..” “ အင်း….အင်း…..ကြိုက်တယ် ……ကြိုက်တယ်….အောင်.. ..လိုး…လိုးထည့်စမ်းပါ… .ခပ်ပြင်းပြင်းလေး . .” စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင့်ထည့် ထောင်းသွင်းပေးမိတယ် ။ မင်ဒီရဲ့ အော်ညည်းသံတွေ ကျယ်လောင်လာတယ် ။ သူရောကိုယ်ရော စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပြိုင်အဆိုင် ဆွဲကြတာမို့ သိပ်မကြာလိုက်ဘဲ နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင် တူလို ပြီးခြင်းကို တက်လှမ်းသွားကြရတယ် ။ ခဏတာ အမောဖြေ လှဲလျောင်းလိုက်မိပေမယ့် သီရိ ပြန်မလာခင် ထလိုက်ကြရင် ကောင်းမယ် လို့ မင်ဒီက ပြောပြီး လူးလဲ ထလိုက်တာကြောင့် သူလည်း ထ လိုက်ရတယ် ။ မင်ဒီ ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်သွားတဲ့ အချိန် ဖုန်းလာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အဉ္စရာ ခေါ်တာ ဖြစ်နေတယ် ။
အဉ္စရာက “ ဘယ်တော့ ထပ်တွေ့ကြဦးမှာလဲ အောင်..” လို့ မေးတယ် ။ စိတ်ထဲမှာ ငါတော့ ငါးရံ့နှစ်ကောင်တောင် မက ဖမ်းနေပြီလား..လို့ တွေးလိုက်မိတယ် ။ ပါးစပ်ကတော့ “ တွေ့ကြမယ် အဉ္စရာ.. မနက်ဖန် ဆိုင်ကို လာခဲ့ပါလား….” လို့ ပြောလိုက်မိတယ် ။ အဉ္စရာက သူ ဖုန်းခေါ်ပြီး ထပ် ချိန်းမယ် လို့ ပြန်ပြောတယ် ။ ဒီနေ့ ဆိုင်မှာ မနက်ပိုင်း လူပါးသလောက် နေ့လည်ပိုင်းကို ရောက်လာတော့ လူစည်ကားနေတယ်။ ဆိုင်က သေနတ်ပစ်ခန်းမှာလည်း လူပြည့်နေတယ် ။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ကယ်ဗင် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက “ အောင်..မင်းဆီ လာလာနေတဲ့ အာရှမလေး နဲ့ တွေ့ဖြစ်သေးလား….” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ စကားစလာတယ် ။ “ တွေ့ဖြစ်တယ်…ဒီနေ့တောင် ချိန်းထားသေးတယ်….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
ကယ်ဗင်က ဒီနယ်မြေက ရဲတယောက်ပေါ့ အချိန်ပိုင်း လာလုပ်နေတာ ။ တက် ကလည်း ကယ်ဗင်က သေနတ်ပြင်တတ်လို့ သဘောကျတယ် ။ မျက်နှာချိုပြီး လူတွေကို ရောတတ်ပြောတတ်လို့ ဆိုင်မှာ အသုံးဝင် အားကိုးရလို့ သူအားတဲ့အချိန်တွေ လာလုပ်ဖို့ ခွင့်ပေးထားတာ ။ “ မင်းက စော်ကြည်ဘဲ ဘဲ အောင်…” လို့ ကယ်ဗင်က ပြောလိုက်လို့ “ မင်းကကောကွာ..ငါဖြင့် မင်း ရဲ့ ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေးတွေ အမြဲ ပါပါနေတာ တွေ့နေတာဘဲ…” လို့ သူ့ကို ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန် ဆိုင်ထဲကို အဉ္စရာ ၀င်လာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ “ ပြောရင်းဆိုရင်း မင်း အာရှမလေး လာနေပြီ . . . ” လို့ ကယ်ဗင်က ပြောတယ် ။ အဉ္စရာ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကပ်စတန်မာ သိပ် မရှိဘူး ။ ကယ်ဗင်နဲ့ မ်ိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် ။
အဉ္စရာက “ မင်းကို ကြို ဖုန်းမဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူး..အမေ့ဖက်က အဒေါ်တယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောနေလို့….”လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ “ အောင်..အပြင်ထွက် နေ့လည်စာ စားကြမလား”လို့ မေးတယ် ။ “ ကောင်းသားဘဲ…ဘာစားချင်လဲ. ..” လို့ ပြန်မေးလိုက်ပြီး ဟိုဖက်ကောင်တာမှာ သေ နတ်တလက်ကို ဖြုတ်နေတဲ့ တက်ကို “ ငါ အပြင်ထွက် စားလိုက်အုံးမယ်….” လို့ လှမ်းပြောလိုက်ပြီးခါးက သေနတ်နဲ့ အိတ်ကို ဖြုတ်…အံဆွဲထဲကို ထည့်လိုက်တယ် ။ လုပ်နေတာတွေ အဉ္စရာက သေသေချာချာ စူးစမ်းတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေတယ် ။ “ အောင်..မင်းတို့တတွေ ဆိုင်ထဲမှာ သေနတ်တွေ ချိတ်ထားကြတာ….ကျည်ဆံကော ထည့်ထားလား..မောင်းကော တင်ထားလား….” လို့ မေးတယ် ။ အဉ္စရာက သေနတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနေကျ ..။
ကျည်ဆံတော့ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ရှိတာပေါ့..မောင်းတော့ တင်မထားပါဘူး . . လို့ ပြောပြ လိုက်တယ် ။ “ အရေးအကြောင်းဆို မောင်းတင်နေရမှာပေါ့….” လို့ ထပ်မေးတော့ “ အဟန့်အနေနဲ့သေနတ်ချိတ်ထားတာ ပါ….တကယ်တမ်း လိုမှ မလိုအပ်ဘဲ…..” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ ကိုယ်လုပ်တာကို ကိုယ် ပြောပြတာပါ ။ ကယ်ဗင်လို ရဲတယောက်ကတော့ သူ့တာဝန်ချိန်မှာ ဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ချိန် မဟုတ်ဘဲ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ရဲတယောက်ရဲ့ အကျင့်အတိုင်း သေနတ်ကို မောင်းဆွဲတင်ထားပြီး မောင်းထိန်းခလုပ်ဘဲ ချထားလေ့ရှိတာဘဲလေ ။ ဆိုင်ထဲကနေ အဉ္စရာနဲ့ ထွက်ခဲ့ကြတယ် ။ အပြင်မှာ နေပူနေတယ် ။ ၀တ်ထားတဲ့ စွယ်တာလက်ပြတ်ကိုတောင် ချွတ်ချင်သွားတယ် ။
ဆိုင်ထဲမှာတော့ အဲကွန်းကြောင့် အေးစိမ့်နေလို့ ဆွယ်တာ ၀တ်ထားတာ ..။ “ ဘာသွားစားကြမလဲ…အောင် . . .” အဉ္စရာရဲ့ ကားလေးနဲ့ဘဲ ထွက်ခဲ့ကြတယ် ။ သူ့ကားထဲမှာ ရေမွေးနံ့တွေ သင်းပျံ့နေတယ် ။ “ အမှန်အတိုင်း ပြောရမလားဟင် . .” “ ပြောလေ..ဘာလဲ…..” “ နေ့လည်စာ မစားချင်ဘူး . . ” “ ဟင်..မဆာဘူးလား..မနက်က ဘာစားထားလို့လဲ..တနာရီတောင် ထိုးနေပြီ . . ” “ စားဖို့ထက် မင်းနဲ့ဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်နေတာ …” “ အို . . ” အဉ္စရာက ပြုံးသွားတယ် ။ “ ဟွန့်..သူကတော့ ကဲလာပြီ . . ” “ တကယ်…ခဏလေး ဖြစ်ဖြစ် သွားတွေ့လိုက်ကြရအောင်လား.. .” “ အို..မကဲနဲ့ကွာ…” “ လာပါ..ဒီနားမှာ ဟောလီးဒေးအင်း ရှိတယ် … သွားလိုက်ရအောင် ..” “အောင် မကဲလာနဲ့ကွာ….” လို့ ပြောပေမယ့် ဟိုတယ်ရှေ့လည်း ရောက်ရော။
သူ့ကားကို ကွေ့ချ ၀င်သွားလိုက်လို့ “ မကြာခင်..စားရတော့မယ် ” ဆိုတာ သိလိုက်တာနဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားက ဖွား ဖက်တော် လက်နက်က ဒိန်းကနဲ တောင်မတ်သွားရတယ် ။ အဉ္စရာကို နောက်တခါကျရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆွဲပစ်လိုက်မယ် လို့ မှန်းထား တေးထားခဲ့တာတွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ရတော့မယ် ။ မနေ့ကဘဲ မင်ဒီနဲ့ အပြတ် ဆွဲထားခဲ့ပေမယ့် အောက်က ငတိက မစားရတာ ကြာနေတဲ့အတိုင်း တခါခါ တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတယ် ။ အဉ္စရာက ကားထဲမှာဘဲ ထိုင်ကျန်ရစ်ပြီး…“ ရယ်ဒီ ဖြစ်ရင် လာခေါ်လိုက်…” လို့ ပြောတယ် ။ ဟိုတယ်ထဲကို အတူတူ မ၀င်ချင်ဘူး တဲ့ ။ လာဖြုတ်ကြတယ် ဆိုတာကို သူတို့ သိလို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ကြည့်လိမ့်မယ်…” လို့ ပြောတယ် ။ အခန်းတခန်း ရမလား လို့ ကောင်တာက ကောင်မလေးကို မေးလိုက်တော့….။
ရပါတယ်..ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲ. .. လို့ ပြန်မေးတယ် ။ “ အချိန်ပိုင်းဘဲ နေဖြစ်မှာ ” လို့ ဖြေလိုက်တော့ ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာက တမျိုး ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒီဘဲ စော်လာဖြုတ်တာဘဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုး ။ အခန်းသော့ရပြီးတော့ အ၀င်တံခါးပေါက်ကနေ ပြန်မထွက်ဘဲ ဟိုတယ်ရဲ့ ဘေးပေါက် တံခါးအသေးလေးကို အသာဖွင့်ပြီး ကားထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ အဉ္စရာကို လက်လှမ်းပြပြီး ခေါ်လိုက်တယ် ။ အဉ္စရာ ရောက်လာတယ် ။ ဟိုတယ် စင်္ကြန်ကနေ အ၀င် လော်ဘီကောင်တာ ဖက်ကို မသွားဘဲ တဖက်ခြမ်းက ဓါတ်လှေခါးနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တက်လိုက်ကြတယ် ။ သုံးထပ်က ဟိုတယ်အခန်းလေးထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ သူ အဉ္စရာရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်မိတယ် ။ အဉ္စရာကလည်း ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ကိုင်တယ် .. ဖင်ကိုတော့ မဟုတ်ဘူး ။
ပေါင်ကြားက မာငေါနေတဲ့ ဖွားဖက်တော် ဆီကို ..။ “ အို့….မာထွားနေပြီ …ခိခိ…ရယ်ဒီ ဖြစ်နေပြီဘဲ …” လို့ ရယ်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ ဖင်ထယ်ထယ်ကြီးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်နယ်နေမိတယ် ။ “ ခဏနေအုံး….ရေချိုးခန်း ၀င်လိုက်အုံးမယ် . . ” အဉ္စရာက သူ ဘာဂျာသမား ဆိုတာ သိလို့ အရင်ဆုံး သန့်ရှင်းရေး ၀င်လုပ်တာ ဖြစ်မယ် လို့ စဉ်းစား မိရင်း ပြုံးလိုက်မိတယ် ။ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်နေရင်း အဉ္စရာကို ဒီကနေ့ ထမင်းစားရုံ လောက်ဘဲ တွေ့ကြတာလို့ ထင်ထားခဲ့ရာက ဟိုတယ် ရောက်လာပြီး ဖြုတ်ဖြစ်သွားခဲ့တာကို ကျေနပ် သဘောကျနေမိတယ် ။ ရေချိုးခန်း တခံခါး ပွင့်လာတဲ့အချိန် တံခါး အနောက်ဖက်မှာ ရပ်စောင့်နေလိုက်တယ် ။ အိုး..သူလည်း အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပြီး မျက်နှာသုတ်တဘက်ကြီး ကိုယ်မှာ ပတ်ထားပြီး ထွက်လာတာ …။
အနောက်ကနေ ဗြုံးကနဲ သိမ်းဖက်လိုက်လို့ “ အိုး…” ဆိုတဲ့ အသံလေးနဲ့ လန့်အော်လိုက်တယ် ။ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေတာကို တအံ့တသြ ကြည့်လိုက်ပြီး…“ ဟာ….ရယ်ဒီကို စောင့်နေတာပါလား..” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က တဘက်အဖြူကြီးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဘဲ ဆွဲခွာပစ်လိုက်မိတယ် ။ ကုတင်ပေါ်ကို အတူတူ လှမ်းတက်လိုက်ကြရင်း နှုတ်ခမ်းချင်း လျာချင်း ထိတွေ့လိုက်ကြပြီ ။ ဆူကော့နေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အငမ်းမရ လှမ်းကိုင်လိုက်မိတယ် ။ သူ့လက်ကလည်း မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ဒုတ်ပေါ်ကို ရောက်လာတယ် ။ တယောက်နဲ့ တယောက် ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ကြရင်း လျာချင်း ကလိနေမိတယ် ။ “ ငါလည်း မင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုး တွေ့ချင်နေမိတယ်..အောင်…. ညဖက် အိပ်လို့တောင် မပျော်ဘူး…သိလား…” လို့။
အသံတုန်တုန်နဲ့ ပြောလိုက်ပြီး ဒုတ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း အထစ်ကို ကျကျနန ပွတ်ကြည့်နေတယ် ။ “တအား ယားနေပြီကွာ….ယက်ပေးမနေနဲ့ တော့..တခါထဲ ထည့်ဆောင့်ပေးတော့….” ဆောင့်လိုက်ကြတာ ဒလကြမ်းဘဲ ။ ကိုယ်ကဆောင့် သူက ကော့ပေး ။ အပြတ်ကို တက်ညီလက်ညီ ဆွဲတဲ့ ပွဲကြမ်းတပွဲ …။ “ အိုး…အိုး…..အား….အား ….အား…..လိုး….လိုး.. …တအားလိုး……အား…ကော င်းတယ်….ဆောင့်…ဆောင့်. .. ဆောင့်ပေး…..လိုး….လိုး ….မြန်မြန်…..မြန်မြန်. ….တအား…တအား……..အား ….အား…ဟား….အား…ရှီး……..” သူ့အသံတွေက ကျယ်လောင်လွန်းနေတယ် ။ တဖပ်ဖပ် တစွပ်စွပ် အသံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ အဉ္စရာ တအား ကော့ပေးပြီး သွေးရူးသွေးတန်းတွေ အော်ဟစ်ညည်းတွားလာတယ် ။
အရမ်းဆောင့်ဖို့ မြန်မြန်ဆောင့်ဖို့ တောင်းဆိုလာတယ် ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူ ပြီးခါနီးလာပြီ ဆိုတာကို သိလိုက်တယ် ။ သူ့တောင်းခံချက်တွေကို လိုက်လျောဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့ လတ်တလော ဆောင့်နေတဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို တိုးမြှင့်လိုက်တယ် ။ အဉ္စရာက အောက်ပေးကောင်းရုံတင် မကဘူး…အတွင်းထဲကနေ ဆွဲညှစ်ပေးနေတာကြောင့် ဆောင့်ရတာ အရသာတအားကောင်းနေတယ် ။ သူမပြီးသေးခင် ကိုယ်ပြီးသွားမှာကိုတောင် စိုးနေရတတယ်။ “ အား..ပြီးတော့မယ်…..ဆောင့် ဆောင့်….အိုး……အိုး. …..အား…..ဆောင့်……” ခြေထောာက်နှစ်ချောင်းကို ထောင်ပြီး ခေါင်းလေးရမ်းခါလို့။
အော်ညည်းနေတဲ့ အဉ္စရာဟာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်ထည့်နေတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် မကြာခင်မှာဘဲ ပြီးသွားပါတော့တယ် ။ ဆန့် ငက်ဆန့်ငင်နဲ့ တုန်ခါပြီး လမ်းဆုံးကို တက်ရောက်သွားတဲ့ အဉ္စရာရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးစုထောင်ပြီး ဆက်ဆောင့်လိုက်တာ ခဏချင်းမှာဘဲ တအားကောင်းသွားပြီး သုတ်ရည်တွေ တအား ပန်းထွက်ပြီး အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်သွားရတယ် ။ အဉ္စရာလည်း ခွေခွလေး အိပ်နေတယ် ။ အိမ်သာခွက်မှာ သေးပေါက်ရင်း အဉ္စရာရဲ့ ပစ္စည်းကသူ့တန်ဆာကို ညှစ်ဆွဲယူပေးခဲ့တာကို ပြန်စဉ်းစားရင်း သဘောကျနေမိတယ် ။ သည်လို ညှစ်ဆွဲအားပေးတတ်တဲ့ မိန်းမ မျိုးနဲ့ ကြုံခဲတယ်လေနော့ …… ပြီးပါပြီ။
ခဲအို ချစ်တဲ့ ခယ်မလေး